Ogaden News Agency (ONA) – Yaa ku Adkaaday Dagaalkii Gaza? Ma Adkaysiga Shacabka Gaza ama F16kii Isra’iil
Yaa ku Adkaaday Dagaalkii Gaza? Ma Adkaysiga Shacabka Gaza ama F16kii Isra’iil
Posted by ONA Admin	/ August 12, 2014
Sidii la filayay waxaa bilowday falanqaayntii iyo taxliilintii dagaalka dabadii iyo in la’is weydiiyo – Yaa ku adkaaday dagaalkii Gaza (Who won the Gaza war). Waxaa kaloo soo baxday in qof walba dhankuu u janjeedho dareenkiisa uu siiyo dhibca badan, ka dibna uu dhankaa u rido guusha inay raacday. Markase si dhex-dhexaadnimo ah loo fiiriyo, taasoo adag, waxaa kuusoo baxaysa in dagaalka ka socda Gaza haduu ahaa hadafkiisu, in Iraadada/Hanka Xamas la jabiyo ka dib marka adkaysiga shacabka Gaza uu xamali waayo dhibka loo gaystay, in hadafkii sidaa ahaa ay Israa’iil ku guuldareysatay, inkastoo dhibka soo gaadhay shacabkaa
Maqaala badan ayaa laga qoray su’aashaa oo sidaan horey usoo sheegay qofba dhankuu jiray dareenkiisa uu la aaday, hasa ahaatee maqaal uu qoray ninka lagu magacaabo Tony Karon ayaa iigu macquulsanaa intaan akhriyay. Wuxuu asaas uga dhigay general Carl Von Clausewitze oo u dhashay Prussia (Germany). Wuxuu yidhi; Guusha Istraatiijiga ah oo Dagaal uu keenay waxaa laga qiyaasaa horumarka ama dibu dhaca uu gaadhsiiyay Siyaasadda dhanka kaa soo horjeeda. Taasoo macnaheedu yahay in dagaalka sababta loo qaadayo ay tahay in ugu dambaynta dhanka kaasoo horjeeda aad ku qasabto waxaad rabtay. Aynu fiirino hadaba labada dhan ee Isra’iil iyo Xamas dagaalkii dhacay midwalba wuxuu kasbaday ama lumiyay.
Shaki kuma jiro inay Israa’iil ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaanba boqolaal jeer ka xoog badan tahay Xamas iska daaye dawladaha carbeed oo isu tagay. Inay awoodaa yeelato Isra’iil waxaa ka shaqeeyay dawladaha reer Galbeedka, gaar ahaan Mareykanka oo dad badan ay aaminsan yihiin in awooda uu ku leeyahay R/wasaaraha dawladda Isra’iil dalka Mareykanka ay ka badan tahay midda uu ku leeyahay M/weynaha Mareykanka. Awooda ciidan iyo dhaqaale ee Isra’iil waxay u adeegsatay inay kula wareegto dalkii Falastiin gabai ahaantii, inkastoo caalamka u aqoonsan yahay dal la gumaysto, Daanta Galbeed (West Bank) oy ku jirto Magaalada Bariga Al-Qudus iyo Gaza.
Dagalkan hadda ka qarxay Gaza ma’aha mid iska yimid ee waa dagaal ay Isra’iil sii qorsheysay, waxayna ku qaadaan labadii sanaba mar iyagoo ula baxay – Mowing The Grass (Caws Jarid) oy ula jeedaan in markay kasoo doogsadaan shacabka Gaza dhibaatadii ay gaadhsiiyeen oo xoogaysataan Xamaas in la baabi’yo mar kale. Waxaadse moodaa hadda in caalamkana wada arkay xaasidnimadaa, cawskiina uu ka adkaaday sidii hore, makiinadii ay ku jarayeena ay duugowday. Sababtoo ah, 3exdii dagaal ee lagu qaaday Gaza midba midkii ka dambeeyay waxay lasoo baxayeen ciidamada xamas tab ka duwan midii hore oo ka yaabisa ciidanka Isra’iil.
Dagaalkan ugu dambeeyay waxay Xamas soo bandhigtay taaktiik cusub oo aanay Isra’iil ku talagalin, sawaariikh gaadhay dhamaan magaalooyinka Isra’iil oo fadhiisiyay garoonkii Tel Aviv, iyo mintidnimo aan horey loo arag markay diideen xabad joojin shuruud la’aan ah. Waxaa arimahaa garab socday dagaalka dacaayadda oo lagaga guulaystay Isra’iil gaar ahaan markii caalamka laga daawaday Komaandoos Xamaas ah oo dhabar jibin ku sameeyay ciidankii Yuhuuda oo qabsaday xero lagu magacaabo (Nahal Oz ) Nexal Coos.
Waxaa intaaba isku fuuqsaday shacabka Gaza oo si wadajir ah isu garab taagay Xamas iyo muqaawamada oo diiday inay u liicaan dhibaatada xad dhaafka ah ee loo gaystay. Iyadoo ciidanka Isra’iil uu hadaf ka dhigtay inuu dhibka ugu badan gaadhsiiyo shacabka say uga horyimaadaan Xamas. Hadafkii sidaa ahaa, Isra’iil guuldaro ayay kala kulantay iyo in caalamka laga naco. Xataa dawladihii horey isu garab taagi jiray, gar iyo gardaraba ayaa difaaci kari waayay akhlaaq xumada ciidanka Yuhuuda.
Iskusoo duub, dagaalkan oo aan weli dhamaanin, waxay u egtahay, haddii wadahadalka ka socda Qaahira aan lagu ciilin wafdiga wadajirka ah ee ree Falastiin, inay Isra’iil guuldarro kala kulmi doonto, waxaana la saadaalinayaa inuu galaafan doono mustaqbalka siyaasadeed ee R/wasaaraha Yuhuuda Natenyaho.